Yakavanzika Policy - Forex Lens
ZVIMWE ZVIMWE MIBVUNZO
Iye anoshandira haazorenda, kutengesa, kuwana kana nenzira ipi neipi shandisa ruzivo rwevatengi rwevatengi. Ruzivo urwu runochengetedzwa zvakavanzika nenzira yepamusoro kwazvo.
Isu tinounganidza email maairesi evaya vanotaurirana nesu kuburikidza neemail, kuunganidza ruzivo rwekuti ndeapi mapepa vatengi vanowana kana kushanya, nzvimbo inofungidzirwa, IP kero, neruzivo rwakazvipira nemutengi (semuongorori ruzivo uye / kana saiti kunyoreswa) .Ruzivo isu tinotora rinoshandiswa kugadzirisa zviri mukati mapeji edu eWebhu uye mhando yebasa redu.
Tinokumbira ruzivo rwakadai sezita rako, zita rekambani, kero yeemail, kero yekubhadhara uye ruzivo rwekadhi rechikwereti kune vashandisi vese masevhisi edu. Isu tinoshandisa ruzivo rwakawunganidzwa kwezvinotevera zvinangwa zvinotevera: zvigadzirwa nemasairo ekupa, kubhadharisa, kuzivikanwa uye kuisimbisa, kuvandudza masevhisi, kuonana, uye kutsvagisa
Kuki idiki diki yedata, iyo inowanzobatanidza isingazivikanwe identifier, iyo inotumirwa kubhurawuza rako kubva kune webhusaiti yemakomputa uye yakachengetwa pane yako komputa hard drive. Ma cookie anodikanwa kuti tishandise basa redu. Isu tinoshandisa makuki kunyora ruzivo rwechizvino chikamu, asi usashandise cookies asingaperi.
Isu tinoshandisa vechitatu vatengesi uye vanobatirana vanobatsirana kupa zvinodiwa, software, network, chengetedzo uye hukama nehunyanzvi hwekuita mabasa anopihwa. Kunyangwe isu tine iyo kodhi, dhatabhesi uye kodzero dzese dzekushandisa, iwe unochengetedza kodzero dzese ku data rako.
Tinogona kuburitsa pachena ruzivo rwunogona kuzivikanwa pasi pemamiriro ezvinhu akasarudzika, sekutevedzera subpoenas kana kana zviito zvako zvichityora Mitemo Yebasa.
Isu tinogona nguva nenguva kumutsiridza iyi mutemo uye tokuzivisa iwe nezve shanduko yakakosha pamabatiro atinoita ruzivo rwevanhu nekutumira chiziviso kukero yekutanga yeemail yakanangidzirwa kune yako account kana nekuisa ziviso yakakurumbira pane yedu saiti. Izvi zvinosanganisira kuiswa kwe data mune chinoitika Forex Lens inowanikwa ne kana kubatanidzwa neimwe kambani.
Paunenge uchinyorera kana kunyoresa pane yedu saiti, sezvakakodzera, iwe unogona kukumbirwa kuti uise zita rako, email kero, tsamba yekutumira, nhamba yefoni, kadhi kiredhiti ruzivo, nhamba yekuchengetedza munharaunda, Custom Fields kana zvimwe zvinoda kukubatsira iwe neruzivo.
Isu tinotora ruzivo kubva kwauri kana iwe uchinyoresa pane yedu saiti, isa chinyorwa, kunyorera kune tsamba yenhau, kupindura kuongororo, zadza fomu, Shandisa Live Chat, Vhura Tiketi Yekutsigira kana kuisa ruzivo pane yedu saiti.
Tipeiwo mhinduro pane zvedu zvigadzirwa kana masevha Bhindau
• Kufananidza ruzivo rwako uye kutibvumira kuti tipe rudzi rwehutano uye zvigadzirwa zvezvibereko umo iwe unofarira zvikuru.
• Kuvandudza webhusaiti yedu kuitira kuti tishandise zviri nani.
• Kutitendera kuti tibatsire kushanda iwe pakupindura kune zvikumbiro zvebasa rako.
• Kutungamirira makwikwi, kukurudzira, kuongorora kana imwe nzvimbo yepaiti.
• Kukumbira kuongororwa nekuongororwa kwemashumiro kana michina
• Kuitevera pamwe navo mushure mokuburana (kurarama mharidzo dzekukurukura, email kana foni)
Nzvimbo yedu yepaIndaneti inoratidzirwa nguva dzose yezvigaro zvekuchengetedza uye inozivikanwa zvisingakwanisi kuitira kuti iwe kushanyira panzvimbo yedu ive yakachengeteka sezvinobvira.
Isu tinoshandisa nzira dzakasiyana-siyana dzekuchengeteka kana munhu anoshandisa mutemo kupinda, kuisa, kana kuwanika ruzivo rwavo kuchengetedza kuchengetedzwa kwemashoko ako ega.
• Batsira kuyeuka uye kugadzirisa zvinhu zviri mungoro yekutenga.
• Ramba uchitarisa kushambadza.
• Anounganidza aggregate data pamusoro pekuchengetedzwa kwepaiti uye nzvimbo yekubatanidza kuitira kupa zviitiko zvakanakisa zvepaiti uye zvigadzirwa munguva yemberi. Isu tinogona kushandisawo mazano evanhu vatatu vanovimbika avo vanocherechedza ruzivo urwu kwatiri.
Kana vashandisi vachidzima makuki mubrowser yavo:
Ukadzima makuki zvinodzima zvimwe zvezvinhu zvesaiti.
Isu hatitengesi, kutengesa, kana kutumira kune dzimwe nyika mapepa ako Mashoko Akasvikanwa Pamwe kunze kwekunge tipei vashandisi nekufanoziva. Izvi hazvirevi webhusaiti yekutambira pamwe nevamwe vemapato vanotibatsira mukushanda webhusaiti yedu, kuita bhizimisi redu, kana kushandira vashandi vedu, chero bedzi mapato aya anobvumirana kuchengetedza iyi ruzivo rwakavanzika. Tinogonawo kusunungura ruzivo kana kusunungurwa kwakakodzera kuti titeerere mutemo, shingairira mazano edu epaiti, kana kudzivirira kodzero dzedu kana dzevamwe, pfuma kana kuchengeteka.
CalOPPA ndiyo mutemo wekutanga wehurumende munyika ino kuti utsvake nzvimbo dzekutengeserana uye nhepfenyuro dzepaIndaneti kuisa purogiramu yega yega. Mutemo unosvika zvakanaka kupfuura neCalifornia kunoda chero munhu kana kambani muUnited States (uye inofungidzira nyika) iyo inoshanda mawebsite ekuunganidza Mashoko Evanhu Anozivikanwa kubva kuCalifornia vashandisi kutumira chinangwa chevhangeri rega rega pahutanditi yepaiti iyo inotaura zvakananga mashoko ari kuunganidzwa uye avo vanhu pachavo kana makambani anowirirana navo. - Ona zvakawanda pa: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Maererano naCalOPPA, tinobvuma zvinotevera:
Vashandi vanogona kushanyira nzvimbo yedu kusingazivikanwi.
Kana imwe nguva purogiramu yepachivande yakasikwa, tichawedzera kuibatanidza nayo pane peji redu kana kuti zvishoma, pekutanga peji peji mushure mokupinda webhusaiti yedu.
Nzvimbo Yedu Yepamutemo Inosungirirana inosanganisira shoko rokuti 'Privacy' uye inogona kuwanikwa zviri nyore pane peji yakataurwa pamusoro apa.
Iwe uchazoziviswa nezvepi zvayo Purogiramu Yechirongwa inoshanduka:
• Pamusoro peChinyorwa Chedu Chedu Peji
• Nokupinda muActa yako
Sangano redu rekushanda rinorevei?
Tinokudza Usingaiti Mitemo uye Usatenderera, simbisa makiki, kana kushandisa shamba kana Usingaiti (DNT) shanduro nzira iripo.
Nzvimbo yedu yepaiti inobvumira zvitatu zvekuita zvinotevera?
Zvakakoshawo kuziva kuti tinobvumira zvitatu zvekufambisa tsika
Mashoko Akanaka Akanaka
Mashoko Akanaka Ezvakanaka Maitiro Anoumba hurumende yemutemo wehupfumi muUnited States uye pfungwa dzavanosanganisira dzakabatanidzwa zvikuru mukusimudzirwa kwemitemo yekuchengetedza kwepasi pose. Kunzwisisa Mashoko Akanaka Ezvakanaka Maitiro uye maitiro avanofanira kutevedzwa zvakakosha kutevedzera mitemo yakasiyana-siyana yehupfumi inochengetedza ruzivo rwemunhu.
Kuti tive maererano neChirangaridzo Chekuita Mazano Tichaita zvinotevera zvinoteerera, kana kukanganisa kwezvinhu kuchiitika:
Tichakuzivisa iwe ne-mail
• Mukati meZ1 zuva rebhizimisi
Tichazozivisa vashandisi ne-in-site notification
Isu tinobvumiranawo neRuvidual Redress Principle iyo inoda kuti vanhu vave nekodzero yekutevedzera zviri pamutemo kodzero dzinoshandiswa nevatori vematare uye vatsoropodzi vanokundikana kutevedzera mutemo. Izvi hazvirevi kuti chete vanhu vane kodzero dzakasimba kune vashandisi vekushandisa, asiwo kuti vanhu vanoenda kumatare kana masangano ehurumende kuti vaongorore uye / kana kutsiura kusateereri nevanotora data.
• Tumira mashoko, pindura mibvunzo, uye / kana zvimwe zvikumbiro kana mibvunzo
• Nzira dzekutsvaga uye kutumira mashoko uye zvinyorwa zvine chokuita nemirairo.
• Tinokutumirai mamwe mashoko anowirirana neyakakigadzirwa uye / kana basa
• Misika kune tsamba yedu yekunyora kana kuramba tichiendesa kutumira maimeri kuvatengi vedu mushure mokunge mutengesi wekutanga wapera.
• Kwete kushandisa nhema kana kuti kunyengedza nyaya kana maizai e-mail.
• Zivai mharidzo sechitsvaga mune imwe nzira yakakodzera.
• Itaiwo kero yebhizinesi redu kana nzvimbo yepamusoro.
• Chengetedza zvitatu zvemashoko ekutengeserana ema email ekuteerera, kana imwe inoshandiswa.
• Kudza opt-out / unsubscribe kukumbira nokukurumidza.
• Bvumira vashandisi kuti vasazvinyora kuburikidza vachishandisa chibvumirano pazasi kwe email imwe neimwe.
• Tevera mirayiridzo iri pasi pemumwe wega email.
uye tichakurumidza kukubvisa kubva ALL tsamba.
Yakagadziriswa Pakupedzisira kwe2018-05-23